Fanaanadda iyo aktarada Maraykanka ah ee Whitney Houston oo geeriyootay iyadoo 48 jir ah – Radio Daljir
Febraayo 12, 2012 12:00 b 0
Los Angeles,Feb 12 -Fanaanada iyo aktarada caanka ah ee Maraykanka ee Whitney Houston ayaa ku dhimatay Los Angeles iyadoo 48 sano jir ah.
Afhayeen hadlay oo lagu magcaabo Mark Rosen ayaa weriyayaasha u sheegay in fanaanada Houston la helay iyadoo meyd ah oo taalla Beverly Hilton Hotel, halkaasi oo ay marti ku ahayd.
Fanaanadan oo ka mid ahayd haweenka loogu jecelyahay fankeeda ayaa qaaday heesaha ay ka mid yihiin ? I Will Always Love You and Saving All My Love For You? ,inkastoo fankeeda uu dhibaato u keenay guurkeedii heesaaga kale ee Bobby Brown sanadkii 2007dii.
Waxa sababay geerida gabadhan hoobalada ahayd ayaan weli la garanayn ,laakiin Police-ka ayaa sheegaya in aan lahayn calaamad muujinaysa fal denbiyeed.
Fanaandan Whitney Houston ayaa ka dhalatay qoys faneed,waxana fanka ku jiray hooyadeed Cissy Houston ilma adeerteed oo kala ahaa Dionne Warwick, goddaughter iyo Aretha Franklin.
Whitney Houston oo ku soo barbaartay gobolka New Jersey ayaa fankeedu gaadhay meeshii ugu saraysay sanadihii sideetamaadkii iyo sagaashamadkii , xilligaasi oo ay iibisay malaayiin cajil.
Marka laga tago heesaha, fanaadan ayaa sidoo kale ka qaybqaadatay jilida Filimada ,iyadoo Filimaantii ay wax ka jishay ay ugu caansanaayeen The Bodyguard iyo Waiting to Exhale.
Sanadihii ugu dameeyey isticmaalka daroogada ayaa dhibaato u keenay mihnada faneed ee Whitney Houston ,waxana fanaanadaasi oo lagu tilmaamijiray tan ugu cod macaan codkeeda dhaawacay isticmaalka daroogada.
Fanaanada heesaaga ah oo ku guulaysatay abaalmarinta Grammy ayaa la filayaa in geerideedu ay saamayn ku yeelato xaflada abaalmarintaasi oo qorshuhu yahay in lagu qabto Los Angeles axada soo socota.
Baahin: Sabti, Feb 11, C/risaaq C. Silfar ~ Daljir ~ Garowe. Ciidanka badda ee Puntland oo badbaadiyey 13 tahriibayaal dumar & caruur ah; tiro kale ayaa geeriyootay; Taliyaha ciidanka badda ayaan ka waraysanay; M/weyne Shariif oo kormeeray xarumo dawladeed ee ay baneeyeen shacabku; Barakac ka bilawday meelo ka mid ah gobolka Gedo; Nabadoon Maxamed Sh. Xasan ayaan ka waraysanay; Tababar ku saabsan maamul wanaaga & baahinta maamulka oo ka furmay Garowe.